Nahoana i Samia Orosemane, Silamo Frantsay Mpanao Hatsikana, No Milaza Fa Mitovy Amin’ny UFO / OVNI Izy? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2017 18:22 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Français, Nederlands, Português, 日本語, 繁體中文, Italiano, Shqip, English
Samia Orosemane manitsy ireo fitsaratsaram-poana mikasika ny fiarahamoniny ao Afrika Avaratra tao anatin'ny fiakarana an-tsehatra tontosainà vehivavy iray tao Parisy. sary: Adeline Sire
Niseho voalohany teo amin'ny PRI.org tamin'ny 16 Aogositra 2017 ity tantara nosoratan'i Adeline Sire ity. Naverina navoaka indray izany mba ho ampahany amin'ny fiarahamiasa misy eo amin'ny PRI sy ny Global Voices.
Asa miavaka tsy kely ho an'ny vehivavy Frantsay iray Silamo ao amin'ny faritra ambanivohitr'i Parisy ny miakatra ambony lapihazo, raha tsy hiresaka afa-tsy ny maha-mpanao hatsikana mandeha irery azy.
Ampidiro Samia Orosemane.
Tamin'ny fanombohan'ny fiakarany an-tsehatra samirery nataony tao Paris “Femme de couleurs” (“Vehivavy Hafa Volonkoditra”), niakatra an-dapihazo tao anatinà hira fampidirana nanafangaroana ny “Jaws” sy “Star Wars” ilay mpanao hatsikana iray 37 taona, teratany Toniziana. Mitafy voaly mainty hatrany an-doha ka hatrany am-paladia, fihetsika mampangitakitaka no iakarany eo ambony lapihazo maizina. Avy eo, ao anaty ampahany, mingonongonona miteny izy hoe, “Izaho no reninareo.” Toran'ny hehy ny mpijery.
“Oadray, izany ve no mampahatahotra anareo? hoy izy, nanondro ny voaly maintiny. “Aza manahy, azo ovàna ity.”
Nony avy eo nakipany ny voaly, nampiseho ny lohany norakofan'ny fehiloha.
Izay no Orosemane aminy, miresaka ny fadifady momba ny hijab. Sakanan'i Frantsa avokoa ireo marika amin'ny fivavahana rehetra, anisan'izany ny sarondoha Silamo, any amin'ny sekolim-bahoaka sy ho an'ireo mpiasam-panjakana sasantsasany. Mitondra fehiloha maroloko i Orosemane fa tsy hijab – Zavatra lazainy hoe raisin'ny olona sasany ho olana. Lazain'izy ireo fa tokony ho maontina kokoa izy ary tsy hampiseho ny tenany.
“Toa te-hilaza amin-dry zareo aho hoe: ‘Ny anareo eritreretina.’ Misy milaza fa tsy tsara noho ny salim-behivavy ilay fehiloha anaovako satria mbola misy ampahany amin'ireo sofiko no miseho, ary tena manaitra filàna izany. Tiako holazaina amin-dry zareo ny zavatra tahàka izany izay nolazain'ny mpanao hatsikana iray tamiko, “Eny ambony lapihazo, heverina ho toy ny mitanjaka ianao, ahoana no hahafahanao manao hetsika miaraka amin'ny voaly eny ambony lapihazo? Nefa ampahany amin'ny maha-izaho ahy iny, sahala amin'izay nolazaiko taminareo fa tsy tiako hety volonareo. Tonga eto aho hampihomehy olona, fa tsy ho atao tsikera ara-pivavahana. Mpanao hatsikana no asako, ary ankehitriny mihevitra aho fa manao ny asako tsara.”
Tamin'ny andro nihaonako taminy, nitondra fehiloha mavokely sy ambonin'ankanjo mifanaraka amin'izay i Orosemane, nanao lokomena sy manjamaso mavokely. Ny fiankanjoany araka izay tiany, hoy izy, no maha-vehivavy azy.
Tao anatin'ny fampisehoana nataony, ivazivaziany ireo karazam-pitenenana sy fitsaratsaram-poana marobe, avy amin'ireo Afrikana Avaratra hatrany Parisy mitovy lenta amina ankizivavy Valley Amerikana iray. Fanebahana henjankenjana io, saingy tsy mandratra ireo olona velively izany. Hitan'i Orosemane fa toy ny fahafahana mitovy no omen'ny hatsikany handonana ny tsirairay, ary tafita tany amin'ny mpihaino izany.
“Sarotra ny mamaritra ahy,” hoy izy. “Ny tena marina, na ireo olona mitovy fiaviana amiko aza tsy mahalala hoe inona no mitranga. Rehefa manondro olona iray aho, tsy misy mahalala hoe iza moa aho. Sahala amin'ny OVNI aho. Vehivavy, teraka tao Frantsa, avy amina ray sy reny Toniziana, miakanjo sahala amina vehivavy avy any Sahara atsimo izay miaina ny fiainany ary mitondra fehiloha . Ahy manokana ny safidiko. Tsy manandrana ny safidy tsy mety amiko aho; tsy manandrana hanao izay hahafalifaly.”
Maneso ny kolontsaina Toniziana misy azy ihany koa i Orosemane. Tao afovoan'ny fampisehoana no namborahany ny adiny tamin-dreniny momba ny fampiarahana taminà lehilahy mainty hoditra iray, bandy Frantsay iray avy any Martinika izay nivadika ho Silamo. Nanohitra ny fanapahankevitry ny reniny i Orosemane rehefa niteny taminy fa hanambady an'io lehilahy mainty hoditra io. Konetaka noho ny hadisoam-panantenana no setrin'izany.
Ny fakàna vady tsy Afrikana-Tavaratra dia heverin'ireo sasantsasany ao anaty vondrom-piarahamonina misy an'i Orosemane fa tsy fanao na dia Silamo aza izy.
“Nilaza natetika tamiko ny reniko, ‘Aleoko lavitra Arabo iray mpisotro toaka toa izay lehilahy mainty hoditra iray mivavaka,'” hoy Orosemane. “Fanavakavaham-bolonkoditra raiki-tampisaka io izay manjaka ao anaty vondrom-piarahamonina Afrikana Tavaratra, sahala amin'ny any an-kafa. Matahotra olona hafa ny olona rehetra. Ny fanatontosana izany eny ambony lapihazo no làlana iray hampieritreretana olona mikasika azy io.”
Nanome tsodrano ny fanambadiana ihany ny renin'i Orosemane nony farany. Teny an-dampihazo, ireharehan'i Orosemane ny maha-vady tsy manaraka be fahatany ny fombafomba azy manoloana ny vadiny.
“Ao an-tokantrano, manadio trano rangahy, miantsena, mahandro, ary izaho manakorontana,” hoy izy. “Rehefa tonga ao an-trano aho, atsipiko eto ny voaliko, ery ny ambonin'akanjoko ary ny poketrako ary, sady hoy izy: ‘Samia, mba hajao ny asako!'”
Mivezivezy malaky manodidina ny lampihazo izy, ary avy eo niteny moramora, tamim-pitsikiana, “Tena tsara ny tsy voafatopatotry ny Arabo iray!”
Nanampy izy avy eo fa, “Ho an'ireo reny Arabo rehetra ao anatin'ny mpanatrika tonga hiandry ahy ao ivelany ao, mba mariho kely azafady, hajanoko ny firesahana an'ity raha vao manomboka mampianatra an'ireo zanaka lahinareo mba hanadio ianareo.”
Nahazo tehaka sy fihomehezana izy tamin'izany.
Tamin'ny fampisehoana nataony, tanjon'i Orosemane ny mamely olona amin'ny alalan'ny fampihomehezana saingy tia manokatra ny saina ihany koa izy.
“Miezaka ny mba ho ilaina araka izay mety aho. Raha afaka manorina tetezana any amin'izay misy rindrina aho, dia tena sambatra. Hiezaka ihany aho. Raha mety io, tena tsara, raha tsy izany, hitodika ho any amin'ny olona hafa aho.”